ပေါင်းတည်မြို့တွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လူတစ်ဦးသေဆုံး - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပေါင်းတည်မြို့နယ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၇) ရက် နေ့လယ်(၃) နာရီ က ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း မြို့နယ်ထွေအုပ် ရုံးရှေ့ ရန်ကုန် ပြည် လမ်းမပေါ်မှာ ...
It's Rena's birthday today! - [image: Twoo] Gatot Rahardjo It's Rena's birthday today! [image: Message from Rena] Rena, 31 [image: Home] Jakarta Pusat Selamat Ulang Tahun, Rena! ...
ကမ္ဘာ့သတင်း မီဒီယာတွေထဲက မြန်မာ (၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈) -
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ ချူပ်၏ သ၀ဏ်လွှာ။ - မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ ချူပ်၏ သ၀ဏ်လွှာ။